Tobim-pamokarana tondra-drano: toetra, fampiasana ary tombony | Green Renewable
Portillo Alemanina | | Angovo avy amin'ny ranomasina
Ao amin'ny tontolon'ny angovo azo havaozina dia misy ny fantatra kokoa toy ny angovo azo avy amin'ny masoandro sy ny angovon'ny rivotra ary ny hafa tsy dia fantatra loatra toy ny angovo an-dranomasina. Izy io dia karazana angovo azo havaozina izay manararaotra ny onjan-dranomasina. Mba hanaovana izany dia mila a toby famokarana herinaratra izay toerana misy ny fiovan'ny angovo kinetika amin'ny onjan'ny angovo elektrika.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny tobin-jiro tondra-drano, ny toetrany ary ny asany.
1 Angovo tondra
2 Tobim-pamokarana herinaratra
2.1 Generators amin'izao fotoana izao
2.2 Tohodranon'ny ranomasina
2.3 Angovo mahery vaika
4 Fampandehanana ny toby famokarana herinaratra
Manana tanjaky ny angovo goavana ny ranomasina, izay azo avadika ho herinaratra amin'ny alalan'ny teknolojia samihafa. Amin'ireo loharanon-kery an-dranomasina araka ny nofaritan'ny Institute for Energy Diversification and Saving (IDAE), dia mahita karazany maro isika:
Angovo avy amin'ny ranomasimbe: Izy io dia ny fampiasana ny angovo kinetika amin'ny onjan-dranomasina hamokarana herinaratra.
angovo onja na angovo onja: Izany dia ny fampiasana ny angovo mekanika amin'ny onja.
Thermal tondra-drano: Izy io dia mifototra amin'ny fanararaotana ny hafanana eo amin'ny rano ambonin'ny tany sy ny fanambanin'ny ranomasina. Ity fiovan'ny hafanana ity dia ampiasaina amin'ny herinaratra.
Herinandron'ny ranomasina na angovo an-dranomasina: Izy io dia mifototra amin'ny fampiasana ny onjan-dranomasina, ny fikorianan'ny rano sy ny fikorianan'ny ranomasina, vokatry ny herin'ny herin'ny masoandro sy ny volana. Noho izany, ny angovo azo avy amin'ny riaka dia avadika ho angovo elektrika amin'ny alàlan'ny fihetsehan'ny turbine, toy ny ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra hydroélectrique.
Ny angovo an-dranomasina dia loharano angovo hafa mifototra amin'ny fampiasana ny fisondrotan'ny ranomasimbe, izay noforonin'ny sinton'ny masoandro sy ny volana. Amin'izany fomba izany, dia fisehoan-javatra voajanahary azo vinaniana izay ahafahantsika mahita mialoha hoe rahoviana ireo fihetsehan'ny rano ireo no ho azo ovaina ho herinaratra.
Ny tobim-pamokarana herinaratra dia iray ahitana ny milina mety hanovana ny angovo kinetika amin'ny tondra-drano ho angovo elektrika. Misy fomba maro ahazoana angovo an-dranomasina. Hojerentsika ny tsirairay amin'izy ireo sy ny lafiny fototra:
Generators amin'izao fotoana izao
Antsoina koa hoe TSG (Tidal Stream Generators), ireo mpamokatra ireo dia mampiasa ny fihetsehan'ny rano mba hamadihana ny angovo kinetika ho herinaratra. Ity no fomba malaza indrindra. Ity fomba ahazoana angovo ity izany dia mitaky vidiny ambany sy fiantraikany ara-tontolo iainana ambany kokoa raha oharina amin'ireo fomba hafa.
Ireo tohodrano ireo dia manararaotra ny angovo azo avy amin'ny rano izay misy eo anelanelan'ny tsy fitoviana eo amin'ny fiakaran'ny rano sy ny ambany. Izy ireo dia sakana amin'ny turbine, tena mitovy amin'ny tohodrano nentim-paharazana, natao teo amin'ny fidirana amin'ny helodrano na farihy. Lafo ny vidiny ary tsy dia lafo ny tombony. Ny tsy fahampian'ny toerana eto amin'izao tontolo izao izay mahafeno ny fepetra hampiantranoana azy ireo sy ny fiantraikan'ny tontolo iainana dia lesoka roa lehibe.
Angovo mahery vaika
Ny teknolojia dia eo amin'ny sehatra teorika. Antsoina koa hoe DTP (Dynamic Tidal Power), izy io dia manambatra ny roa voalohany, manararaotra ny fifandraisana misy eo amin'ny angovo kinetika sy ny hery amin'ny fikorianan'ny ranomasina. Ity fomba ity dia misy rafitra tohodrano lehibe izay mampirisika ny fizotry ny tondra-drano isan-karazany ao anaty rano mba hanetsehana ny turbine mpamokatra herinaratra.
Tsindrianay fa manana tombony maromaro ity angovo hafa ity:
Izy io dia loharano angovo madio izay tsy mamokatra entona maloto na loto hafa avy amin'ny karazana angovo hafa.
Tsy misy solika fanampiny ampiasaina.
Famokarana herinaratra mitohy sy azo antoka.
Tsy mety ritra ny onja ary mora vinavinaina.
Loharano angovo azo havaozina izy io.
Na dia eo aza ny fahafaha-manao lehibe, ny fampiasana ny herin'ny rano dia manana fatiantoka ihany koa, ao anatin'izany:
Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fampiasam-bola lehibe. Lafo ny fametrahana azy.
Manana fiantraikany lehibe amin'ny maso sy ny tontolo iainana amin'ny morontsiraka izy io, izay iray amin'ireo tsy fahampiana mampanahy indrindra amin'ny angovon'ny rano.
Ny herin'ny rano dia tsy safidy tsara indrindra ho an'ny faritra ara-jeografika rehetra. Satria miankina amin’ny haavon’ny fihetsehan’ny ranomasina sy ny herin’ny onjan-dranomasina ny habetsahan’ny angovo azontsika.
Ny herin'ny rano Efa hatramin’ny taona 1960 no nampiasaina hamokarana herinaratra. Ny firenena mpisava lalana dia i Frantsa, izay mbola miasa ny orinasa mpamokatra herinaratra ao Lens.
Ny firenena manana fahaiza-mamokatra herinaratra amin'izao fotoana izao dia: Korea Atsimo, arahin'i Frantsa, Kanada, Royaume-Uni ary Norvezy. Amin'izao fotoana izao, ampahany kely amin'ny totalin'ny angovo azo havaozina eran'izao tontolo izao ny angovo azo avy amin'ny rano, saingy lehibe ny mety ho azony.
Fampandehanana ny toby famokarana herinaratra
Ny tobim-pamokarana herinaratra an-dranomasina dia toerana iray avadika ho herinaratra ny angovo vokarin'ny onjan-dranomasina. Ho fanararaotana izany dia amboarina any amin'ny tapany ambany ny tohodrano misy turbine, amin'ny ankapobeny dia eo am-bavan'ny renirano na helodrano. Ny fitahirizana novokarin'ny fanamboarana ny tohodrano dia mameno sy manafoana ny fihetsehan'ny onja sy ny fandehanan'ny rano vokariny, mamela ny fanombohan'ny turbine miteraka herinaratra.
Ahoana no hamadihana ny angovon'ny rano ho herinaratra? Mba hamaliana io fanontaniana io, dia ilaina ny mandinika ny fitsipiky ny mety sy ny angovo kinetika ny mahazatra fitomboana sy ny fihenan'ny. ny tondra-drano vokarin'ny fifampikasihan'ny Masoandro sy ny Volana. Ny fiakaran'ny rano dia antsoina hoe fikorianan'ny rano, ary ny fotoana fidinana dia fohy kokoa noho ny teo aloha.
Ny fahasamihafan'ny haavon'ny haavon'ny ranomasina sy ny haavon'ny fitahirizana dia fototra, noho izany, araka ny filazan'ny Institute for Diversification and Conservation of Energies (IDAE), dia tsy mahasoa afa-tsy any amin'ny faritra amoron-tsiraka izay misy ny haavon'ny onjan-dranomasina sy ny ambany. tsy mitovy amin'ny mihoatra ny 5 metatra mifototra amin'ny fametrahana ireo toetra ireo. Ireo fepetra ireo dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny toerana voafetra eto an-tany. Ao amin'ny orinasa, ny herinaratra dia miova amin'ny turbine na alternator. Miaraka amin'ny fihodinan'ny lelany sy amin'ny fiverimberenan'ny rano mihitsy, dia mamokatra angovo elektrika.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny toby famokarana herinaratra sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo avy amin'ny ranomasina » Tobim-pamokarana herinaratra